Apple 1 yakasainwa naSteve Wozniak inotengeswa | Ndinobva mac
Isu tese tinoziva kuti Steve Wozniak ndiani, mubatsiri weApple naSteve Jobs. Chimwe chezviitiko zvakakosha zvavakaita zvese kuvakwa kweApple 1. Komputa chaiyo yakasarudzika. Mazuva ano inogona kusvika pamwero wakakwirira kwazvo mumifandesi kunyanya kana ichichengetwa zvakanaka uye ichishanda. Kana kune izvo zviviri zvinodiwa isu tinowedzera siginecha yeumwe wevagadziri vayo, isu tine chirongwa chakaringana kuti tiwane akakwirira kwazvo manhamba.
Ngatiitei diki nhoroondo isingatomborwadzise. Iyo Apple 1 yaive komputa yemunhu yakaburitswa neApple Computer Kambani (yava kunzi Apple Inc.) muna 1976. Izvo zvakagadzirwa uye zvakavakwa naSteve Wozniak uye Steve Jobs. Iyo komputa akaenderera mberi nekutengesa nemutengo we 666,66 madhora (Whims waWozniak aifarira kudzokorora manhamba) muna Chikunguru 1976.
Parizvino Apple 1 komputa yakasainwa naSteve Wozniak Iyo inokwira kukosheni nemutengo wekutanga we $ 50.000. Asi hongu kwete kwete nekuda kwesiginicha chete, asi nekuti iri muchimiro chakakwana nezvose zvacho zvakakosha kuti zvishande. Chii chimwe unofanirwa kuwedzera yekutanga Apple kutumira bhokisi iyo iri mune yakafanana yakanaka mamiriro ekuchengetedza.
Iyi Apple-1 komputa yakadzoreredzwa kune yayo yekutanga uye inoshanda mamiriro munaGunyana 2020 naApple-1 nyanzvi Corey Cohen, uye vhidhiyo yacho iri kushanda iri kuwanikwa pakukumbira. Vanokodzera kukwikwidza vane chirevo chakazara pamusoro pehunyanzvi mamiriro akagadzirirwa naCohen. ndinoziva inoongorora mamiriro azvino ekutyaira se8.0 / 10. Kunze kwekuvapo kweiyo yakasarudzika yekutanga bhokisi rekutumira, imwe yesarudzo shoma uye mabhokisi anozivikanwa nhasi, chinonyanya kuzivikanwa cheiyi Apple-1 komputa ndechekuti zvakanyorwa kuti zvinoshanda zvizere: iyo sisitimu yakamhanya isina-mhosho kwemaawa angangoita masere pakuyedza kuzere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple 1 yakasainwa naSteve Wozniak kumusoro kwekutengesa
Josh Elman achabatsira Apple kufungidzira akanakisa maapplication